Ogaden News Agency (ONA) – Ku Celinta Doorashada Kenya oo Xiligeedii Dhacaysa.
Ku Celinta Doorashada Kenya oo Xiligeedii Dhacaysa.
Posted by ONA Admin	/ September 23, 2017
Xeer ilaaliyaha guud ee dalka Kenya Githu Muigai ayaa sheegay in doorashada ku celiska ah ee la filayo in ay ka dhacdo dalkaasi dhammaadka bisha dambe ay dhici doonto wakhtigii loogu talagalay, xitaa haddii mucaaradku ay qaadacaan doorashadaasi.
Maxkamadda ugu sarreysa dalkaasi ayaa horraantii bishan amartay in guddiga doorashada uu qabato doorasho ku celis ah muddo 60 maalmood gudahooda ah. Xilligaasi ay maxkamaddu qabatay ayaa ku eg kowda bisha soo socota ee Oktoobar.
Muigai oo shir jaraa’id ku qabatay casimadda Nairobi ayaa sheegay in madaxweyne Uhuru uu xilka sii hayn doono, ilaa iyo inta madaxweyne cusub laga dooranayo.
Xeer ilaaliyaha guud ee Kenya oo ka hadlayay digniinta mucaaradka ee ahayd in aysan ka qayb gali doonin doorashada haddii aan la fulin waxyaabo ay dalbadeen ayaa waxa uu sheegay in waligeed aysan dhicin in natiijada doorasho loo laalo sababo la xiriira musharax qaadacay ama aan ka qeyb gelin awgeed.
Dhanka kale, isbahaysiga mucaaradka ee NASA ayaa dacwad oogaha guud ee dalka u qabtay muddo 72 saacadood ah in uu dacwad ku soo oogo shakhsiyaad ka tirsan guddiga doorashooyinka sababo la xiriira khaladaad ka dhacay doorashadii dhacday horrantii bishii hore.